Kabtan Sergio Ramos oo raadinaya xilli ciyaareedkiisii labaad oo casaan la’aan ah! – Gool FM
Madaxweynaha UEFA oo xiddig aan ahayn Messi iyo Ronaldo u doortay laacibka ugu fiican Adduunka
(Madrid) 04 Juun 2020. Ma jiro ciyaaryahan ka casaan qaadasho badan taariikhda La Liga kabtanka Real Madrid ee Sergio Ramos.
Si kastaba ha ahaatee, Ramos ayaanan wax casaan ah laga siin horyaalka La Liga tan iyo bishii Febraayo ee sanadkii 2019-kii kulan ay la ciyaarayeen kooxda Girona, waxaana xilligaas ay ahayd waqtigii adkaa ee xukunkii Santiago Solari.
Balse waxa uu seegi doonaa kulanka ay kooxdiisa booqaneyso Naadiga Manchester City ee lugta labaad wareegga 16-ka tartanka Champions League kaddib markii labo kaar jaalle ah iyo casaan loo taagay ciyaartii lugtii hore.
Toddobo kaar oo digniin ama jaalle ah ayaa loo taagay difaaca Spain tan iyo billawgii xilli ciyaareedkan horyaalka La Liga, balse wax casaan ah ma uusan qaadan 27-kii kulan ee ugu horreysay fasalkan ciyaaraha horyaalka Spain.
Ramos ayaa 14 xilli ciyaareed oo La Liga ah la dhammeystay Los Blancos, waxaana kaliya uu xilli ciyaareed dhammeystay isagoo casaan la’aan ah fasalkii 2014-15, inkastoo uu dhaawac ahaa haddana uu ciyaaray kaliya 27 kulan oo horyaalka ah, sidaas oo ay tahayna waxa uu aruursaday 12 kaararka digniinta ah ama jaallaha ah.
Xilli ciyaareedkii uu ugu Jaallaha badnaa waxa uu ahaa 2008-09, sidoo kale waxa uu min labo casaan qaatay fasal ciyaareedyadii 2015-16 iyo 2017-18.
Ku guuleystaha Koobka Adduunka sanadkii 2010-kii ayaa sidoo kale rikoor dhanka casaanka ah ayuu ka heystaa tartanka Champions League isagoo afar jeer qaatay, waxaana uu kala siman yahay Zlatan Ibrahimovic iyo Edgar Davids.